အာဏာလွှဲပြီတဲ့…. | kothihaoo
web sites များ
ငွေကြေးဈေးကွက် သတင်းပါ	နျူကလီးယား ဓါတ်ရောင်ခြည်
kothihaoo	Uncategorized	Leaveacomment
နိုင်ငံတော် အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖံွ့ဖြိုးရေးကောင်စီသည် ကြေငြာချက်အမှတ် (၆/၂ဝ၁၁) ကို ၁၃၇၂ ခုနှစ် တန်ပေါင်းလပြည့်ကျော် ၁၁ ရက်၊ ၂ဝ၁၁ ခုနှစ် မတ်လ ၃ဝ ရက် ဒီကနေ့ရက်စွဲဖြင့် …
နိုင်ငံတော် အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖံွ့ဖြိုးရေးကောင်စီသည် ကြေငြာချက်အမှတ် (၆/၂ဝ၁၁) ကို ၁၃၇၂ ခုနှစ် တန်ပေါင်းလပြည့်ကျော် ၁၁ ရက်၊ ၂ဝ၁၁ ခုနှစ် မတ်လ ၃ဝ ရက် ဒီကနေ့ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်ကြေငြာပါတယ်။
အပိုဒ်(၁) ၂ဝ၁၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၃၁ ရက်နေ့မှ စတင်၍ အာဏာတည်ခဲ့သော ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေနှင့်အညီ ဖွဲ့စည်းသည့် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်များတွင် ဥပဒေပြုရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အဆင့်ပုဂ္ဂိုလ်များအား သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများနှင့်အညီ ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်းနှင့် လွှတ်တော်၏ သဘောတူညီချက် ရယူခြင်းများကိုဆောင်ရွက်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
အပိုဒ် (၂) သို့ပါ၍ သက်ဆိုင်ရာဥပဒေ နည်းဥပဒေများနှုင့်အညီ နည်းဥပဒေများနှင့် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်း၊ သက်ဆိုင်ရာ လွှတ်တော်များ၏ သဘောတူညီချက် ရယူချက်များ ဆောင်ရွက်ပေးသည့် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အဆင့် ပုဂ္ဂိုလ်များအား ၂ဝ၁၁ ခုနှစ် မတ်လ ၃ဝ ရက်နေ့ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်များတွင် ကတိသစ္စာ ပြုပြီးသည့် အချိန်မှစ၍ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်၏ ဥပဒေပြုရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာ အာဏာများကို လွှဲပြောင်းပေးအပ်လိုက်ကြောင်း ကြေငြာလိုက်သည်။
အထပ် အပိုဒ် (၂) ပါ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အဆင့် ပုဂ္ဂိုလ်များ ကတိသစ္စာ ပြုပြီးသည့် အချိန်မှ စ၍ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ကောင်စီများကို ဖျက်သိမ်းလိုက်သည်။
သန်းရွှေ (ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး -ဥက္ကဌ)
နိုင်ငံတော် အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ
နိုင်ငံတော် အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖံွ့ဖြိုးရေးကောင်စီသည် ကြေငြာချက်အမှတ် (၈/၂ဝ၁၁) ကို ၁၃၇၂ ခုနှစ် တန်ပေါင်းလပြည့်ကျော် ၁၁ ရက်၊ ၂ဝ၁၁ ခုနှစ် မတ်လ ၃ဝ ရက် ဒီကနေ့ရက်စွဲဖြင့်ထုတ်ပြန်ကြေငြာပါတယ်။
အပိုဒ်(၁) ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ (၂၈၈) တွင် ခရိုင်အဆင့်နှင့် မြို့နယ်အဆင့်တို့၏ အုပ်ချုပ်ရေးကို နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများအား တာဝန်ပေး ဆောင်ရွက်စေရမည်ဟု လည်းကောင်း၊ ပုဒ်မ (၂၈၉) တွင် ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စု၏ အုပ်ချုပ်ရေးကို ရပ်ရွာမှကြည်ညိုလေးစားပြီး သိက္ခာသမာဓိ ရှိသည့် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးကို ဥပဒေနှင့်အညီ ခန့်အပ်တာဝန်ပေး ဆောင်ရွက်စေရမည်ဟု လည်းကောင်း ပြဌာန်းထားပါသည်။
အပိုဒ်(၂) သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီများက မိမိတို့၏ တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ခရိုင် မြို့နယ် ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စုများတွင် ခရိုင် မြို့နယ် ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စု အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို လွှဲပြောင်း ပေးနိုင်ရန် သက်ဆိုင်ရာ ပုဂ္ဂိုလ်များသည် ခရိုင် မြို့နယ် ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စုများတွင် အဆင်သင့် ရှိနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း တင်ပြခဲ့ပါသည်။
အပိုဒ် (၃) သို့ပါ၍ အောက်ပါခရိုင် မြို့နယ် ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စု အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီများ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ၂ဝ၁၁ ခုနှစ် မတ်လ ၃ဝ ရက်နေ့မှာ စ၍ ယှဉ်တွဲဖော်ပြပါ ပုဂ္ဂိုလ်များသို့ လွှဲပြောင်းပေးလိုက်သည်။
အပိုဒ်ခွဲ (က) ခရိုင်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ ခရိုင်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန အုပ်ချပ်ရေးမှူး
အပိုဒ်ခွဲ (ခ) မြို့နယ်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ မြို့နယ်အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန အုပ်ချုပ်ရေးမှူး
အပိုဒ်ခွဲ (ဂ) ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စု နယ်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူး
အပိုဒ် (၄) ထိုသို့ လုပ်ငန်းတာဝန်များ လွှဲပြောင်းပေးပြီးသည့် အချိန်မှ စ၍ ခရိုင်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ကောင်စီများ၊ မြို့နယ် အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီများ၊ ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စု အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီများကို ဖျက်သိမ်းလိုက်သည်။
mail မှ မှာယူဖတ်ရှုရန်
post အသစ်တင်တိုင်း mail ပို့အကြောင်းကြားပေးနိုင်ရန် သင့်email လိပ်စာထည့်သွင်းပေးပါ။
ြ​မင်မိ၊ြ​ကား​မိ၊ ဖတ်မိ​သမျှ
ြ​မင်မိ၊ြ​ကား​မိ၊ ဖတ်မိ​သမျှ Select Month April 2011 (22) March 2011 (10)
အမျိုး​အစား​အလိုက်ရှာေ​ဖွ​ဖတ်ရှု​ရန် Select Category ကဗျာ (2) ကိုသီဟ (1) နည်းပညာ (3) ဗဟုသုတ (1) ရသ (3) သတင်း (5) အင်တာနက် (2) အင်တာနတ် (2) Uncategorized (17)
ကမ္ဘာ့သတင်းမီဒီယာတွေထဲက မြန်မာ (၁၈ မေ ၂၀၁၈)
မှတ်မှတ်သားသား စကားများ (၁၈ မေ ၂၀၁၈)
ကမ္ဘာ့သတင်းမီဒီယာတွေထဲက မြန်မာ (၁၁ မေ ၂၀၁၈)
Facebook မှာ ဖတ်ရှုရတဲ့ ရောင်စုံကာတွန်းများ (၆ မေလ ၂၀၁၈)
Ranked Gaming Client Portable
Advanced JPEG Compressors 5.0
A+ Certification Exam by Zaw Lin (Youth)
C++ Complete (Vol-1) U Aung Myint
Vakok VPN Client
Windows7Activation and Loader for all windows 7
Adobe After Effect CC 2018
Windows XP Service Pack3(32 Bit)
Acronis Backup Advanced v11.7.5
Smadav Pro 2018 v11.8.2
Adobe Illustrator CC 2018 (x86, x64)
Adobe Photoshop CC 2018 (x86bit , x64bit)
Adobe Acrobat XD CC 2018 ပါ ..
အခန်း(၄) Quick Selection Tools and Magic wand tool အကြောင်း
RT @Studentscode: [S]inging, [T]weeting [U]nlimited Texting [D]reaming [Y]awning4years ago
RT @spillitdotme: What do they like about you? Let your friends and family #spillit at spillit.me4years ago
RT @AttivoUK: Are you interested in Fire Alarm Detectors, Panels & Accessories at competitive prices, why not contact us foraquote? #stay…4years ago
RT @fadm_ru: Russian Startup Tour - в Ульяновске. Заявки на участие в питч-сессиях подали 92 ульяновских стартапа, для выступления отобраны…4years ago
RT @Reality_of_Idea: twitpic.com/85jow6 RT @flolenator touch without grasping.behold without possessing.devote without bequeathing.take…4years ago